Faahfaahin Weerarkii lagu qaaday Caawa Guriga Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur – Hornafrik Media Network
Ciidamo Hubaysan oo ka tirsan Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ayaa Caawa weeraray Guriga uu daganaa Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo ka mid ahaa Musharaxiintii u tartamay Jagadda Madaxwaynanimadda Somalia Doorashadii dhacday 8 February.
HornAfrik waxay ogaatay in Weerarkaasi ay ku dhinteen 4 ka mida Illaaladda Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur, iyo 2 Qof oo Gacan yarayaal u ahaa, Waxaa sidoo kale la dhaawacay Siyaasi C/raxmaan C/shakuur. Iyadoona kadib ay xoog ku galeen Ciidamo hubaysan Guriga markii ay noqdeen Ciidankii illaalinayay Siyaasiga mid dhintay iyo Mid dhaawacmay, iyagoona la baxay C/raxmaan C/shakuur oo dhiig baxaya.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in C/raxmaan C/shakuur oo aan helin Daryeel Caafimaad la geeyay Godka Jilacoow, halkaasna looga duubay Muuqaalo lagu sharaf dilayo, Waxaana kadib loo kaxeeyay Xarunta Dhexe ee NISA ee loo yaqaan Habar Khadiijo, iyadoona la galiyay qaybta Hoose ee Dhismaha Xaruntaasi, gaar ahaan Qolkii uu ku xirnaan jiray Xasan Daahir Aways.
Ciidamadda Weeraray Guriga C/raxmaan C/shakuur oo ay wateen Saraakiil lagu kala magacaabo Farxaan Qaroole iyo Najiib, isla markaana uu hogaaminayay Saadaq Joon oo ah Taliyaha NISA ee Gobalka Banaadir waxay bililiqaysteen Guriga Siyaasi C/raxmaan oo ay illaa iyo hadda ku jiraan, iyagoo sidoo kale diiday in la qaado Maydadka iyo Dhaawacyadda Guriga dhex yaala. Waxaana la arkayay iyagoo daad guraynaya Qalab Xafiiseed, Agabkii Guriga yaalay iyo xittaa Boorsooyinkii dharka ee uu lahaa C/raxmaan.
Markii uu Weerarkan dhacayay waxaa C/raxmaan C/shakuur ku wehliyay Guriga, Maareeyihii hore ee Dekadda Muqdisho, Md Zayid Cali oo lagu soo waramayo inuu ka baxsaday Guriga, isagoo bad qaba ka hor intii aysan soo galin Ciidanka Nabadsugiddu.
Qaar ka mida Dadka ugu ololeeya Dowladda Baraha Bulshadda ayaa la amray inay soo qoraan inuu dhintay C/raxmaan C/shakuur, siday xog ku ogaatay HornAfrik, Waxaana markaa kadib aan raadinanay inaan ogaanso sax ahaanshaha Warkan oo ugu dambayn aan xaqiijinay in C/raxmaan C/shakuur uu qabo Dhaawac fudud, Balse ay dhici karto in wax is badalaan, maadaama uusan helin Daryeelkii uu baahnaa, sidoo kalana ay jirto Shaki ah in lagu dhex dilo Xabsiga, siday qabaan Eheladiisa Qaar.
Saan Saan Colaadeed ayaa laga dareemayaa Magaaladda Muqdisho, Waxaana soo buux dhaafiyay Ciidamo Milatari ah oo ka caraysan wixii dhacay, iyadoona ay ku socoto Magaaladda Muqdisho inay gasho Dagaalo hor leh iyo Fowdo ay dhici karto inay Qatar galiso Jiritaanka iyo Dowladnimadda Somalia.